कति तौल भएकाले कति पानी पिउनै पर्छ? जानी राखौ - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»कति तौल भएकाले कति पानी पिउनै पर्छ? जानी राखौ
कति तौल भएकाले कति पानी पिउनै पर्छ? जानी राखौ
By मनिषा थापा on १७ चैत्र २०७४, शनिबार ०७:५१ स्वास्थ्य/जीवनशैली
डाक्टर तथा पोषण विज्ञहरुको सल्लाह अनुसार मानिसले दिनमा कम्तिमा पनि ८ गिलास वा झण्डै दुइ लिटर पानी पिउनु अनिवार्य हुन्छ । तर दिनभरमा कति पानी पिउने भन्ने कुरा मानिसको शरीरको वजन तथा जिउडालमा भर पर्छ । कत्रो जिउ भएका मानिसले कति पानी पिउने ? यसको सुत्र जानिराखौँः
सरीरको लागि आवश्यक पानीको मात्रा पूरा गर्नका लागि केवल पानी मात्र पिउनु आवश्यक छैन । यसका लागि धेरै पानीको मात्रा हुने फलफूल तथा अन्य खानेकुरा पनि भोजनमा सामेल गर्नुपर्छ । सरीरमा २०।२५ प्रतिशत पानीको पूर्ति हामीले खाने खानाहरुबाट प्राप्त हुन्छ । जस्तै एउटा स्याउन ११६ मिलि लिटर पानी हुन्छ । त्यस्तै खरभुजा, सुन्तला जस्ता फलफूलमा पनि प्रसस्त पानी पाइन्छ । एजेन्सी